Fampandrosoana amin’izay… | NewsMada
Mby aiza ny hoe fampandrosoana? Tsia, tsy mbola fanaovana tombana izay asa vita izao, fa ny sehatra sy fotoana ahazoana mirotsaka tanteraka amin’ny asa fampandrosoana amin’izay. Mbola misy ve, ohatra, ny sakantsakana?
Fotoan’ny asa izao. Ny firotsahana amin’izany mivantana sy vokatra mivaingana no maharesy lahatra. Tsy kabary sy fanazavana be intsony izany, na ilaina mandrakariva aza, ohatra, ny hoe fangaraharana: lazaina izay atao, atao izay lazaina.
Tena fampandrosoana izao no andrasana, takina, atao… Na ho an’ny mpanohitra aza, mitondra fampandrosoana ve izay lazaina? Eny, na fanatsaran-javatra ahay farafaharatsiny, fa tsy hitsikera fahatany, fampikatsoana, fandravana…
Ho hitan’ny havany eo izay tsy manao ny asany; eny, mety tsy hisy hihaino sy hijery aza: hilaozan’ny hafa sy ny tantara izany. Fotoan’ny asa mandroso sy mampandroso izao. Asakasak’izay mbola mila kisa hampisy disadisa.